My freedom: Not to Yangon?!
Not to Yangon?!
ဒီရက်ပိုင်း Shopping ချည်း လှိမ့်ထွက်နေတယ်။ မထွက်လို့လည်း မရတော့ဘူးလေ။ နောက်အပတ်ပြန်မှာ ခုထိ ဘာလက်ဆောင်မှ မ၀ယ်ရသေးဘူး။ က,ဖို့လာခေါ်နေသေးတယ်။ အစကတော့ က,ပေးမယ် ပြောထားပြီး နောက်တော့ အားနာနာနဲ့ မက,တော့ဘူးပဲ ပြန်ပြောလိုက်ရတယ် (အားမနာပါးမနာ ပြန်ပြောလိုက်တယ်ပဲ ထားပါတော့)။ ဟုတ်တယ်... ကန်ဒီက ကိစ္စတော်တော်များများကို အားနာပြီး လိုက်လုပ်ပေးတတ်တယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သနားလို့ မလုပ်ပေးတော့ဘူးဆိုပြီး ငြင်းလိုက်တယ်။ မတတ်နိုင်ဘူး... အရမ်းပင်ပန်းတယ်။
အတင်းခေါ်တဲ့သူကလည်း ပြောပုံကိုကြည့်... "ညီမသဘောပါ... အစ်မက အတင်းကြီး မပြောချင်ပါဘူး" (ပထမတစ်ခွန်း)။ "တနင်္ဂနွေနေ့ (၂)နာရီလောက်ပဲ အချိန်ပေးရင် ရပါတယ် ညီမရယ်... ပြီးမှ ညီမပြန်ဖို့ Shopping ထွက်ပေါ့။ ညနေမှ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားလေ" (ဒုတိယတစ်ခွန်း)။ ရှေ့နောက်မညီပုံ ပြောပါတယ်။ ဒါလား... ညီမသဘော... အတင်းမပြောပေလို့ပဲ။ သူပြောတဲ့(၂)နာရီဆိုတာ ပြင်တာဆင်တာနဲ့ သွားတာလာတာ မပါသေးဘူး။ ကန်ဒီ နောက်ဆုံးတစ်ခွန်းပဲ ပြောလိုက်တယ်... "အစ်မ ညီမဘက်ကလည်း စဉ်းစားပေးဦး... ညီမတနင်္ဂနွေတစ်ရက်ပဲ နားရတာ... က,လည်း ကရမယ်... ပြီး Shopping သွားရမယ်... ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကလေးတွေစာသင်ရမယ်... အရမ်းပင်ပန်းတယ် အစ်မ"လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ကန်ဒီကတော့ အဲ့သုံးခုထဲမှာ အမေတို့အတွက် Shopping ထွက်တာနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ကလေးတွေက ပိုအရေးကြီးတယ် ထင်တာပဲ။
ဒီကလေးလေးက အရမ်းအလှကြိုက်တာ (ကန်ဒီ့အတိုင်းပဲ :P)။ အမြဲ သူကလစ်အသစ်လေး ခေါင်းမှာတပ်လာရင် လာလာပြတယ်။ တခြားကလေးတွေကို စာလိုက်ကြည့်ပေးနေရင် မကြိုက်ချင်ဘူး။ သူ့ကို ကြည့်ပေးဖို့ ခေါ်တယ် ဟဟ။ ကန်ဒီ့အကြောင်းကို သူ့အဘွားကို ပြောလွန်းလို့ ဓာတ်ပုံပြရအောင်ဆိုပြီး သူ့အမေရိုက်ပေးထားတဲ့ ပုံလေး ^_^
အဖေနဲ့အမေအတွက် ကန်ဒီ့စိတ်ကြိုက်လက်ဆောင် ၀ယ်ပြီးသွားပြီ။ အခုတော့ မပြသေးဘူး... အခုပြရင် သူတို့အရင်မြင်သွားမှာ စိုးလို့ ဟီး(xD)။ ညီမလေးနဲ့မောင်လေးအတွက် ဘာဝယ်ပေးရမလဲ မသိသေးဘူး။ မေဒေးပိတ်ရက်မှ သွားဝယ်ရမယ်။ OMG!! ဒီအပတ်သောကြာနေ့က ကန်ဒီ့မွေးနေ့ပဲ... 26th Birthday (26th!!! >.<)။ မငယ်တော့ဘူး။ အချို့နေရာတွေမှာ ကလေးဆန်နေသေးတယ်။
ကန်ဒီပဲ လွန်တာလားတော့ မသိဘူး။ ကန်ဒီဘာလုပ်တယ် ဘယ်သွားတယ် ဘယ်သူနဲ့သွားတယ် အဲ့ဒါမျိုးတွေကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် လာမေးတာမျိုး ကန်ဒီမကြိုက်ဘူး။ ကန်ဒီဘယ်သူနဲ့သွားတယ် ပြောရင်ရော သူတို့သိမှာမို့လို့လား (>.<)။ နောက်ကန်ဒီရတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုက "ကန်ဒီ့ကို Propose လုပ်ထားတဲ့လူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ??" အဲ့လိုလာမေးတော့ လူကကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားတယ် (တသက်နဲ့တကိုယ် တခါမှ အမေးမခံရဖူးလို့)။ ကြည့်ကောင်းအောင်တော့ ဖြေပေးလိုက်တယ်... ပါးစပ်ထဲရှိတဲ့ နံပါတ်ပေါ့။ Sorry, don't blame me... That question is too Personal -.-
နောက်ရှိသေးတယ်။ Facebook မှာ ကန်ဒီတစ်ခုခုရေးလိုက်တယ် ထားပါတော့။ အဲ့ဒါကို သူတို့ကိုပြောတယ်ထင်ပြီး လာမေးတာမျိုးကို ရှင်းပြရတာလောက် စိတ်မရှည်တာမရှိဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် တော်ရုံတန်ရုံ အဲ့မှာမရေးချင်တာ။ ဘလော့မှာတော့ အကုန်ရေးတယ်။ ဒါ ကန်ဒီ့ Diary ပဲ။ ကန်ဒီနဲ့အပြင်မှာသိတဲ့လူတွေကို သူတို့ဟာသူတို့သိသွားတာကလွဲလို့ လာပါလို့ မခေါ်ထားဘူး။ မလာလေ ကောင်းလေပဲ။ သူတို့ဟာသူတို့လာပြီး ကန်ဒီ သူတို့ကိုရေးထားတာတွေဖတ်ပြီး လာပြန်မေးတာလည်း ကန်ဒီလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ ကန်ဒီ့အကျင့်က ကိစ္စတော်တော်များများကို စိတ်ထဲပဲ ထားတတ်တယ်။ ကန်ဒီစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းရေးတာ ဘလော့ပေါ်မှာပဲ ရှိတယ်။ အပြင်မှာ မပြောချင်လို့ ဒီမှာပဲရေးတဲ့ကိစ္စကို ဘာလို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောတာလဲဆိုတာမျိုး လာမမေးပါနဲ့ >.<
အပေါ်နှစ်ပိုဒ်က နည်းနည်းပေါက်ကွဲထားတာ ဟီး ဗွေမယူနဲ့နော်(xD)။ ထားပါတော့... ရန်ကုန်ပြန်မယ့်ကိစ္စ ဆက်ရရင် အမှန်က ကန်ဒီရန်ကုန်ပြန်မယ်လို့ မပြောသင့်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြန်မယ့်(၈)ရက်မှာ (၅)ရက်က ခရီးသွားနေရမှာ။ ရွှေကူသွားဖို့ လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်လို့ မရဘူးတဲ့။ အဲ့တော့ ကားနဲ့ပဲ သွားရမယ်။ ကားနဲ့သွားရင် ၁ရက်ခွဲကျော်ကျော်လောက် ကြာတယ်။ အဲ့တော့ လမ်းမှာအချိန်ကုန်နေဖို့ များတယ် (>.<)။ ဒါပေမယ့် ခရီးသွားနေတာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာနေလည်း ပျင်းစရာကြီးပဲ နေမှာ =.='
သြော်... မေ့တော့မလို့။ ကန်ဒီ သင်္ကြန်တုန်းက က,တဲ့ဗွီဒီယို မတင်ရသေးဘူးနော်။ က,တာတော့ သုံးပုဒ်လောက် က,တာ... ဒါပေမယ့် ဒီသီချင်းတစ်ပုဒ်ပဲ ကောင်းကောင်းရှိတော့ ဒါလေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်ပေးနော် ^_^
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေလို့ ...
Happy Birthday My little Sis lay Candy!Wish u all the best in ur life! ^_^ This is the pre birthday wish for u.coz i cnt read blog with phone.
ဟက်ပီးဘာ့သ်ဒေးပါ ပိစိ။ အသက်ကြီးလာလေ အလှတိုးလာလေ ဖြစ်ပါစေ။
ကန်ဒီပိစိ၊ ဂွမ်းဆီထိ၊ တအိအိပျော်ပါစေ။
ပိစိမွေးနေ့၊ ဆန္ဒပြည့်၊ တရားတွေ့ပါစေ။
ပိစိဘ၀၊ လွန်လှပ၊ အားကျသူတွေ ပေါပါစေ။
Happy Birthday ချိုချဉ်လေး…